အောင်လံမြို့ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကျပ်သိန်း ၁ဝဝ အထက်လုပ်ငန်း ၁ဝ ခု တ?? - Yangon Media Group
အောင်လံမြို့ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကျပ်သိန်း ၁ဝဝ အထက်လုပ်ငန်း ၁ဝ ခု တ??
အောင်လံ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၉
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်လံမြို့ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ၂ဝ၁၈- ၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကျပ်သိန်း ၁ဝဝ အထက် လုပ်ငန်း ၁ဝ ခုအား တင်ဒါခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းမြို့ နယ်စည်ပင်သာယာ ရေးအဖွဲ့ရုံးမှသိရသည်။ ”၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကျပ်သိန်း ၁ဝဝ အထက် လုပ်ငန်း ၁ဝ ခု တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တွေအတိုင်း ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ခေါ်ယူမှာဖြစ် ပါတယ်” ဟု အောင်လံမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ အမှု ဆောင်အရာရှိဦးမြလင်းက ပြော ကြားသည်။
အဆိုပါ ကျပ်သိန်းတစ်ရာ အထက်လုပ်ငန်းများ တင်ဒါခေါ်ယူရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်က မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ ရေးအဖွဲ့ ရုံးကော်မတီအစည်းအ ဝေးခန်း၌ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ထူးမြင့်၊ တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးကျော်၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိဦးမြလင်း၊ မြို့နယ်စည် ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်းမြင့်နှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ အင်ဂျင်နီယာမှူး ဦးထွန်း သူအောင်နှင့် ဒု-ဦးစီးမှူးဒေါ်ခင် ဝင်းမော်တို့ဖြင့် တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အောင်လံမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် (ကျပ်သိန်း ၁ဝဝနှင့်အထက်)လုပ်ငန်းများမှာ လမ်းမတော်လမ်း ၁၆ လမ်း၊ သရက်တော၂လမ်း၊ ကန်ကြီး ရပ်ကွက် ၉လမ်း၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့် စမ်းချောင်းရပ် လယ်ပြင်ရပ်ကွက် အတွင်းလမ်းများ အပါအဝင်ကွန် ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ ကျောက်ချော လမ်းခင်းခြင်းနှင့် အုတ်ရေမြောင်းများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ စုစုပေါင်း လုပ်ငန်း ၁ဝ ခုအတွက် ကျပ်သန်း ၂၂၂ဒသမ၃၃၃ အကုန်အကျခံမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး မဟာဂန္ဓာရုံ ဝိနည်းစာတော်ပြန်ဌာန ဥက္ကဋ္ဌ ဇမ္ဗူ့မင်္ဂလာဆရာတော်ကြီး သက်တော် ၁ဝ၂ ??
”၂ဝ၁၈ က ကန်ရေပြင်လို ပဲငြိမ်တယ်။ ၂ဝ၁၉ မှာတော့ အကောင်းဆုံးတွေပဲဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတယ်” ထွန်